Faah-faahinta QARAXII is-miidaaminta ee Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay - Caasimada Online
Home Warar Faah-faahinta QARAXII is-miidaaminta ee Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay
Faah-faahinta QARAXII is-miidaaminta ee Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay
Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax is-miidaamin ah oo galabta qorax dhicii ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Sida ay xaqiijiyeen booliska iyo goobjoogeyaal, ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa, oo uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa.
Qofka is-miidaamiyey ayaa beegsaday maqaayad ku taalla isgoyska, oo ay ku badan yihiin ciidanka dowladda Soomaaliya.
Laba ka mid ah dadka dhintay ayaa ka tirsanaa ciidamada ammaanka Soomaaliya, sida uu sheegay Maxamed Cali oo ah sarkaal boolis oo ku sugnaa goobta.
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarka.
Caasimada Online ayaa toddobaad kahor 12-kii bishan qortay xog aan kasoo xiganay hay’adaha amniga oo sheegeysa in Muqdisho ay soo galeen ugu yaraan 13 qof oo damacsan inay magaalada ka fuliyaan qaraxyo is-miidaamin ah.